Uyicoca njani i-Creuset Cookware-Eyona ndlela yokuCoca i-Creuset Cookware - Ukucoca
Uyicoca njani i-Creuset Cookware-Eyona ndlela yokuCoca i-Creuset Cookware
Ekugqibeleni uyaphula kwaye uchithe ngaphezulu kunokuba ubufuna ukwenza izinto zokupheka ezinqabileyo, emva koko ufumane ukuba emva kwamaxesha ambalwa okubeka kwi-oveni, kukho ibala lokutya elingathandekiyo kwi-enamel yangaphakathi. Kungakhathaliseki ukuba uhlamba uze ude izandla zakho ziluhlaza okanye uzibeke kwi-dishwasher umjikelezo owongezelelweyo okanye ezimbini, awukwazi ukuzihlambulula. Bemkile kumacwecwe amatsha, amatsha otyalo-mali, ukuya ekujongeni okungcono kunasisiseko, zokupheka ngexabiso eliphantsi. Phakamisa isandla sakho ukuba nguwe lo. Awuwedwa, kwaye ekugqibeleni ndineempendulo ezichanekileyo zendlela ococeke ngayo ukuba ucoca i-Le Creuset cookware.
THENGA NGOKU Le Creuset Enameled Cast Iron Ukucoca, $ 25, amazon.com
Izinto zokuqala kuqala, kuya kufuneka uyazi ukuba yeyiphi into oyicocayo. I-Creuset yintsimbi yentsimbi yokwaleka koqweqwe lwawo. Ibe iyamangalisa ukugcinwa kobushushu, kodwa ngekhe ubuphathe ngokufana ne-cookware yakho engenasinxibo okanye engasebenziyo, kuba, kulungile hayi engenazingcingo okanye enganqamki. Kodwa musa ukuba neentloni kude nebrand ucinga ukuba kukugcinwa okuphezulu, kuba kulula ukuyigcina, wakube uyayazi into oyenzayo.
isityalo esikhulu samagqabi aluhlaza
Yonke intsimbi yethu yentsimbi kukuhlamba izitya okhuselekileyo, kodwa sicebisa ukucoca i-iron yethu ngamanzi afudumeleyo anesepha kunye nesiponji okanye iphedi yokuhlikihla intsimbi, utshilo uNate Collier, uMlawuli wezoPhawu loNxibelelwano lweLe Creuset. Musa ukoyika ukuntywila ipani kumanzi anesepha ubusuku bonke ukuba uyonqena — isambatho saso se-enamel siyakhusela ekurhwebesheni, kwaye akufuneki ukuba sinongwe emva kokumisa.
Kodwa kuthekani ngeendawo ezingayi kuyeka? Sukuba nexhala, kukho isisombululo, kwaye ayithengi ipani entsha. 'Yizisa amanzi kwisimmer esimnene kwi-oveni yase-Dutch esitovini nokuba kunesixa esincinci sesepha yesitya okanye isoda yokubhaka, vumela amanzi apholile, emva koko ukhuhle kwaye uhlambe, utshilo uCollier. Naluphi na ukuthoba kwe-enamel, yethu yenze isicoci sentsimbi isebenza ngokumangalisayo ukususa nayiphi na intsalela. '
USienna Livermore Umhleli woRhwebo USienna Livermore ngumhleli wezorhwebo kwi-Hearst egubungela iimveliso ezithengisa kakhulu, izinto zasekhaya, ifashoni, ubuhle, kunye nezinto ongenakuphila ngaphandle kwazo.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
Igumbi lokuhlala laseBohemian
imifanekiso yamakhaya esitayile sefama